မိနျးကလေးတှဟော ဒီလိုအခွအေနတှေမှော ရညျးစားနဲ့ လမျးခှဲတတျကွပါတယျ - Latest Myanmar News
မိနျးကလေးတှဟော ဒီလိုအခွအေနတှေမှော ရညျးစားနဲ့ လမျးခှဲတတျကွပါတယျ
မိနျးကလေးတှဟော ဒီလိုအခြိနျတှမှော ကိုယျ့ရညျးစားနဲ့ လမျးခှဲတတျကွတယျ…
ခဈြတော့ ခဈြတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့သော အခွအေနတှေမှော လကျလှတျလိုကျတာက ပိုပီးကောငျးပါတယျနျော …။
ကိုယျခဈြရတဲ့ ခဈြသူ ရှိနပေါလကျြနဲ့ အထီးကနျြ နတေယျ ဆိုတာ အဓိပ်ပါယျ လုံးဝ မရှိပါဘူး။ တဈယောကျတညျး နရေတာ မြားလာတဲ့အခါ နသေားကြ သှားတတျပွီး ရှိနတေဲ့ ခဈြသူကိုလညျး မလိုအပျတော့ဘူး လို့ ထငျလာတတျ ကွပါတယျ …။
အပွငျတှေ ဘာတှေ သှားတဲ့အခါ လကျမကိုငျ ဖွဈတာ၊ သူငယျခငျြး မိတျဆှတှေနေဲ့ တှရေ့ငျ ကိုယျ့ကို ခဈြသူတဈယောကျ အနနေဲ့ မိတျဆကျပေးခွငျး မခံရတာတှဟော ဝေးကှာခွငျးရဲ့ အစ ဖွဈပါတယျ …။
မိနျးကလေးတှဟော သံသယ မြားတတျတယျ ဆိုတာ သိပွီးသား ဖွဈကွမှာပါ။ ရှကေို့ ကွိုမွငျနိုငျစှမျးလညျး ရှိပါတယျ။ ခနျ့မှနျးနိုငျ ကွတယျပေါ့။ ကိုယျ့ခဈြသူ ဘယျအကှကျ ရှနေ့တေယျ ဆိုတာ မိနျးကလေးတိုငျး သိပါတယျ။ ငါ့ ကောငျမလေးက ငါ ဘာလုပျလုပျ မသိပါဘူးလို့ ထငျနတေဲ့ ယောကျြားလေးတှဟော ငတုံးတှေ ခညျြးပါပဲ။ မိနျးကလေးတိုငျး သိပါတယျ။ မပွောတာပဲ ရှိတာပါ …။
ဟိုသှားမယျဆိုလညျး မသှားဘူး၊ ဒီသှားမယျ ဆိုလညျး မလိုကျဘူး ဆိုတာမြိုး တှပေါ။ ဂိမျးဆော့စရာ ရှိလို့ ဘယျသူနဲ့ ခြိနျးထားသေးတယျ။ ဒီည ဘယျဘောလုံးပှဲ လာမှာ ဆိုတာတှပေေါ့။ ဘောလုံးပှဲက ကိုယျ့ခဈြသူထကျ အရေးကွီးရငျ ဘောလုံးသာ ဖကျအိပျလိုကျပါ။ ပိုကျဆံ မပေးနိုငျရငျ မုနျ့ဟငျးခါး မစားပါနဲ့ …။
အခြိနျမပေးနိုငျရငျ ရညျးစား မထားပါနဲ့။ အလှူတှမှော စတုဒီသာကြှေးရငျ မုနျ့ဟငျးခါးလညျး အလကား စားလို့ရတယျ ဆိုတဲ့ သူတှကေို တဈခုလောကျ မေးခငျြပါတယျ။ အခြိနျ မပေးနိုငျဘဲ ရညျးစားထားရငျကော ရှငျတို့ လိုခငျြတဲ့ မိနျးကလေးမြိုး ရရဲ့လားလို့ …။
ခဈြသူတှေ ဖွဈလာရငျ တူနှဈကိုယျ ဘဝတော့ တညျထောငျခငျြကွတာ ခညျြးပဲလေ။ မိနျးကလေး ဘကျကခညျြး ရုနျးကနျ နရေတဲ့အခါ အခဈြ မခံရဘူး ထငျသှားနိုငျပါတယျ။ အဲ့ဒီမှာ ပွသနာ ဖွဈတော့တာပဲ …။
သိပျ ထှထှေထေူးထူး ပွောစရာ မရှိပါဘူး။ ကိုယျ့ကို လိမျရငျရော ကွိုကျလား။ ဒါပါပဲ …။
တဈနကေို့ ဖုနျးအခါ ငါးဆယျလောကျ ဆကျ မကျဆတှေ့ေ ဗုနျးပေါလအော ပို့နမှေ ဂရုစိုကျတာ မဟုတျပါဘူး။ တဈနလေုံ့း နလေို့မှ စကားလေး တဈခှနျး မပွောဖွဈရငျတော့ ကိုယျ့ အခွအေနကေိုယျ ကွိုတှေးထားပါ …။
ရှိပါတယျ အဲ့လို ယောကျြားမြိုး။ စီးပှားတှကျ တှကျတဲ့နရောမှာ ယောကျြားလေးတှလေညျး ပါပါတယျ။ သူ့ဘကျပဲ ကွညျ့နတေဲ့ သူမြိုးဆို မိနျးကလေးတှကေ ရှံလာတတျပါတယျ …။
ကိုယျ့ဘကျက ကွိုးစားပမေယျ့ ဘာမှမထူးခွားရငျ…
ကိုယျက ဒီယောကျြားကို ခဈြလို့ လမျးမခှဲဖွဈအောငျ ကွိုးစားနပေမေယျ့ ဘယျလိုမှ အဆငျမပွတေော့ဘူး ဆိုတာ သိလာရငျ ပွတျဖို့ သခြောနပေါပွီ …။
ဘဝအတှကျ သိသာတဲ့ ပွောငျးလဲမှု ရှိလာရငျ…
ဒါမြိုးလညျး ရှိပါတယျ။ ကိုယျ့ ဘဝအတှကျ အခှငျ့အရေး ကောငျးတှေ အလုပျအကိုငျ ကောငျးတှကေ စောငျ့နတေယျ။ ကိုယျ့ ခဈြသူကလညျး ဘာမှ မထူးခွားဘူး (သုံးစား မရဘူးလို့ ပွောခငျြတာပါ။)ဆိုရငျတော့ အဲ့ဒီမိနျးကလေးဟာ ဘာကို ရှေးသငျ့သလဲ ဆိုတာကို ဦးနှောကျနဲ့ ဆုံးဖွတျ တတျပါတယျ။ ဒီနရောမှာ နှလုံးသားကတော့ ရှုံးသှားတာပေါ့ …။
ရရှေညျမှာ မကောငျးတာ ကွိုမွငျမိရငျ…
လူ့အကွောငျး ပေါငျးကွညျ့မှ သိပါတယျ။ အခြိနျ ကွာလာတာနဲ့ ဒီယောကျြားဟာ ဘယျလို ဆိုတာမြိုး သိသှားရငျ ဝေးဝေးက ရှောငျသှားပါတယျ …။
စကားမြားတာနဲ့ ဆဲဆို အျောဟဈတာ လကျပါတတျတာ မြိုးတှကေို ဘယျ မိနျးကလေးမှ မကွိုကျပါဘူး။ ရနျဖွဈတာနဲ့ သငျ့ ကောငျမလေးက သငျ့ကို ပါးခညျြး လှိမျ့ရိုကျရငျကော သငျပွုံးပွုံးကွီး ခံနမေလားဆိုတာ စဉျးစားပါ …။
မှေးကတညျးက ပါလာတဲ့ ဦးနှောကျကွီးက ဘာလုပျဖို့တုနျး။ သုံးပေါ့ ကွိုကျသလို။ မိနျးကလေးတှေ ဦးနှောကျသုံးတဲ့ အခြိနျကရြငျ ယောကျြားလေးတှေ လိုကျမမှီပါဘူး …။
အစကတော့ ဒီ မိနျးကလေးမှ မရရငျ သတေော့ပါမယျ ဆိုတဲ့ ရုပျတှနေဲ့ ရလညျး ရပွီးရော အခြိုးတှေ ပွောငျးကုနျတာကို ယောကျြားလေးတှကေ သူတို့ကိုယျတိုငျ သတိမထားမိပါဘူး။ အဲ့ဒါကို သတိထားမိတဲ့ မိနျးကလေးတှကေ သခြောစဉျးစား ဆုံးဖွတျတဲ့ အခြိနျကတြော့မှ သူတို့ ဘာပွောလဲ သိလား …?
” မငျးတို့ မိနျးမတှကေ သစ်စာမရှိဘူး ” တဲ့။
သစ်စာတရား ဆိုတာ ထိုကျတနျတဲ့ သူဆီမှာပဲ မွဲပါတယျ။ မိနျးမ မရှားဘူးလို့ ကွှေးကွျောနတေဲ့ ယောကျြားလေးတှရေော ရှငျတို့ လိုခငျြတဲ့ မိနျးမမြိုး လိုကျရှာကွညျ့ပါလား။ ရူးတောငျ သှားဦးမယျနျော …။
မူရငျး – Ye zon aung
မိန်းကလေးတွေဟာ ဒီလိုအချိန်တွေမှာ ကိုယ့်ရည်းစားနဲ့ လမ်းခွဲတတ်ကြတယ်…
ချစ်တော့ ချစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့သော အခြေအနေတွေမှာ လက်လွှတ်လိုက်တာက ပိုပီးကောင်းပါတယ်နော် …။
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူ ရှိနေပါလျက်နဲ့ အထီးကျန် နေတယ် ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ် လုံးဝ မရှိပါဘူး။ တစ်ယောက်တည်း နေရတာ များလာတဲ့အခါ နေသားကျ သွားတတ်ပြီး ရှိနေတဲ့ ချစ်သူကိုလည်း မလိုအပ်တော့ဘူး လို့ ထင်လာတတ် ကြပါတယ် …။
အပြင်တွေ ဘာတွေ သွားတဲ့အခါ လက်မကိုင် ဖြစ်တာ၊ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ရင် ကိုယ့်ကို ချစ်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း မခံရတာတွေဟာ ဝေးကွာခြင်းရဲ့ အစ ဖြစ်ပါတယ် …။
မိန်းကလေးတွေဟာ သံသယ များတတ်တယ် ဆိုတာ သိပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါ။ ရှေ့ကို ကြိုမြင်နိုင်စွမ်းလည်း ရှိပါတယ်။ ခန့်မှန်းနိုင် ကြတယ်ပေါ့။ ကိုယ့်ချစ်သူ ဘယ်အကွက် ရွှေ့နေတယ် ဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်း သိပါတယ်။ ငါ့ ကောင်မလေးက ငါ ဘာလုပ်လုပ် မသိပါဘူးလို့ ထင်နေတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေဟာ ငတုံးတွေ ချည်းပါပဲ။ မိန်းကလေးတိုင်း သိပါတယ်။ မပြောတာပဲ ရှိတာပါ …။
ဟိုသွားမယ်ဆိုလည်း မသွားဘူး၊ ဒီသွားမယ် ဆိုလည်း မလိုက်ဘူး ဆိုတာမျိုး တွေပါ။ ဂိမ်းဆော့စရာ ရှိလို့ ဘယ်သူနဲ့ ချိန်းထားသေးတယ်။ ဒီည ဘယ်ဘောလုံးပွဲ လာမှာ ဆိုတာတွေပေါ့။ ဘောလုံးပွဲက ကိုယ့်ချစ်သူထက် အရေးကြီးရင် ဘောလုံးသာ ဖက်အိပ်လိုက်ပါ။ ပိုက်ဆံ မပေးနိုင်ရင် မုန့်ဟင်းခါး မစားပါနဲ့ …။
အချိန်မပေးနိုင်ရင် ရည်းစား မထားပါနဲ့။ အလှူတွေမှာ စတုဒီသာကျွေးရင် မုန့်ဟင်းခါးလည်း အလကား စားလို့ရတယ် ဆိုတဲ့ သူတွေကို တစ်ခုလောက် မေးချင်ပါတယ်။ အချိန် မပေးနိုင်ဘဲ ရည်းစားထားရင်ကော ရှင်တို့ လိုချင်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုး ရရဲ့လားလို့ …။
ချစ်သူတွေ ဖြစ်လာရင် တူနှစ်ကိုယ် ဘဝတော့ တည်ထောင်ချင်ကြတာ ချည်းပဲလေ။ မိန်းကလေး ဘက်ကချည်း ရုန်းကန် နေရတဲ့အခါ အချစ် မခံရဘူး ထင်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ပြသနာ ဖြစ်တော့တာပဲ …။
သိပ် ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာ မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ကို လိမ်ရင်ရော ကြိုက်လား။ ဒါပါပဲ …။
တစ်နေ့ကို ဖုန်းအခါ ငါးဆယ်လောက် ဆက် မက်ဆေ့တွေ ဗုန်းပေါလအော ပို့နေမှ ဂရုစိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေ့လုံး နေလို့မှ စကားလေး တစ်ခွန်း မပြောဖြစ်ရင်တော့ ကိုယ့် အခြေအနေကိုယ် ကြိုတွေးထားပါ …။
ရှိပါတယ် အဲ့လို ယောက်ျားမျိုး။ စီးပွားတွက် တွက်တဲ့နေရာမှာ ယောက်ျားလေးတွေလည်း ပါပါတယ်။ သူ့ဘက်ပဲ ကြည့်နေတဲ့ သူမျိုးဆို မိန်းကလေးတွေက ရွံလာတတ်ပါတယ် …။
ကိုယ့်ဘက်က ကြိုးစားပေမယ့် ဘာမှမထူးခြားရင်…
ကိုယ်က ဒီယောက်ျားကို ချစ်လို့ လမ်းမခွဲဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပေမယ့် ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေတော့ဘူး ဆိုတာ သိလာရင် ပြတ်ဖို့ သေချာနေပါပြီ …။
ဘဝအတွက် သိသာတဲ့ ပြောင်းလဲမှု ရှိလာရင်…
ဒါမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ့် ဘဝအတွက် အခွင့်အရေး ကောင်းတွေ အလုပ်အကိုင် ကောင်းတွေက စောင့်နေတယ်။ ကိုယ့် ချစ်သူကလည်း ဘာမှ မထူးခြားဘူး (သုံးစား မရဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ။)ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာ ဘာကို ရွေးသင့်သလဲ ဆိုတာကို ဦးနှောက်နဲ့ ဆုံးဖြတ် တတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နှလုံးသားကတော့ ရှုံးသွားတာပေါ့ …။
ရေရှည်မှာ မကောင်းတာ ကြိုမြင်မိရင်…
လူ့အကြောင်း ပေါင်းကြည့်မှ သိပါတယ်။ အချိန် ကြာလာတာနဲ့ ဒီယောက်ျားဟာ ဘယ်လို ဆိုတာမျိုး သိသွားရင် ဝေးဝေးက ရှောင်သွားပါတယ် …။
စကားများတာနဲ့ ဆဲဆို အော်ဟစ်တာ လက်ပါတတ်တာ မျိုးတွေကို ဘယ် မိန်းကလေးမှ မကြိုက်ပါဘူး။ ရန်ဖြစ်တာနဲ့ သင့် ကောင်မလေးက သင့်ကို ပါးချည်း လှိမ့်ရိုက်ရင်ကော သင်ပြုံးပြုံးကြီး ခံနေမလားဆိုတာ စဉ်းစားပါ …။
မွေးကတည်းက ပါလာတဲ့ ဦးနှောက်ကြီးက ဘာလုပ်ဖို့တုန်း။ သုံးပေါ့ ကြိုက်သလို။ မိန်းကလေးတွေ ဦးနှောက်သုံးတဲ့ အချိန်ကျရင် ယောက်ျားလေးတွေ လိုက်မမှီပါဘူး …။
အစကတော့ ဒီ မိန်းကလေးမှ မရရင် သေတော့ပါမယ် ဆိုတဲ့ ရုပ်တွေနဲ့ ရလည်း ရပြီးရော အချိုးတွေ ပြောင်းကုန်တာကို ယောက်ျားလေးတွေက သူတို့ကိုယ်တိုင် သတိမထားမိပါဘူး။ အဲ့ဒါကို သတိထားမိတဲ့ မိန်းကလေးတွေက သေချာစဉ်းစား ဆုံးဖြတ်တဲ့ အချိန်ကျတော့မှ သူတို့ ဘာပြောလဲ သိလား …?
” မင်းတို့ မိန်းမတွေက သစ္စာမရှိဘူး ” တဲ့။
သစ္စာတရား ဆိုတာ ထိုက်တန်တဲ့ သူဆီမှာပဲ မြဲပါတယ်။ မိန်းမ မရှားဘူးလို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရော ရှင်တို့ လိုချင်တဲ့ မိန်းမမျိုး လိုက်ရှာကြည့်ပါလား။ ရူးတောင် သွားဦးမယ်နော် …။
မူရင်း – Ye zon aung
Categories အချစ် နှင့် ရသစာပေများ Tags မိနျးကလေ Post navigation
တငျးတိပျ၊ ဝကျခွံ၊ မှဲ့ခွောကျတှကေိုလုံးဝပြောကျကငျးသှားစမေယျ့နညျး